သင်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - - သဘာဝကျကျအိမ်မှာအအေးမိရိုက်ပုတ်6အကြံပေးချက်များ Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - သဘာဝကျကျအိမ်မှာအအေးမိရိုက်နှက်ဖို့ "6 အကြံပေးချက်များ
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်တစ်ဦးကသဘာဝလမ်းအတွက်အိမ်မှာအေးရိုက်နှက်ရန်သင့်အား6အကြံပေးချက်များနှင့်အတူမျှဝေပါ။ ကျနော်တို့နှင့်အတူဤအဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီပေးနိုင်ပါသည် တချို့ရိုးရှင်းတဲ့အကြံပေးချက်ကိုအိမ်ကုစားနှင့်, ရှိသမျှအထက်, ကြွင်းသောအရာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။
အထက်လေကြောင်းရောင်ခြင်းထိုကာလအတွင်းမှာအဆင်မပြေခြင်းနှင့်အဆင်မပြေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ဤအကြံပြုချက်များကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်။
1 ။ ပဋိဇီဝဆေးကိုယူမနေပါနဲ့
ပထမဦးစွာကျွန်တော်တစ်ဦးချမ်းအေးနေတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ကြောင်းသတင်းပို့ရမည်နှင့် ဒါကြောင့်ယူအသုံးနှင့်အပင်အန္တရာယ်ရှိသည် ပဋိဇီဝဆေး။ သူတို့ကဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု၏ကုသမှုများအတွက်ဖြစ်ကြသည်။
အဓိကလက္ခဏာဟာအအေးဖြစ်ပါသည် အထက်အဲယားဝေးရောင်ခြင်း။ ဒါဟာနှာခေါင်း, လည်ချောင်း, trachea, အသံအိုးကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်, အကှေ့ ပင်နားရွက်။ အကျိုးဆက်ကျနော်တို့ယူကုစားသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများသည်ဤနာကျင်ကိုက်သက်သာရာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါပြီးစနစ်အားကောင်းနေခြင်းနှင့်ထိုက်တန်ဘို့5အကြံပေးချက်များ
2 ။ ထိရောက်သောကုစားဘာတွေလဲ?
တချို့ကသဘာဝကကုစားကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းအေးအိမ်မှာကျော်လွှားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ရှိပါတယ် ဆေးဖက်ဝင်အစားအစာ သူတို့ရဲ့အားဖြင့်ခွဲခြားထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဂုဏ်သတ္တိများ, expectorant သို့မဟုတ် decongestant အရာသည်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်
ဂျင်း : ကိုလည်းရောဂါကူးစက်မှုပပျောက်ကူညီပေးရန်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအပူတွေအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ Expectorant ဆေးတစ်လက်
ကြက်သွန်ဖြူ : Raw ကြက်သွန်ဖြူဆန့်ကျင်နေတဲ့အစွမ်းထက်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်
Ceylon သစ်ကြံပိုး : ဒီအမွှေးအကြိုင် expectorant, Anti-inflammatory နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါတယ်
ရှောကျသီး : ပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာ
Cayenne ငရုတ်ကောင်း : ကအလွန်စပ်ရောဂါပျောက်ကင်းဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရှိသောကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကခိုင်မာစေခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုစစ်တိုက်ခြင်း
ပျားပျားရည် : ချောင်းဆိုးသက်သာခြင်းနှင့်ချွဲ၏ထုတ်ပယ်ခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
licorice သူမသည် expectorant, antitussive, ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် emulsifying (mucosal ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး) ရှိပါတယ်
3 ။ ဓါတ်ကိုပြန်လည်
အိမ်မှာချမ်းကိုကျော်လွှားရန်, ကကောင်းမွန်စွာနေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ် ဓါတ်ကိုပြန်လည်။ ထို့အပြင်ဤရိုးရှင်းသောအကွံဉာဏျ အဆိုပါချွဲလျှော့ပေးရေးကူညီပေးပါမည် ဤသို့ပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာရာရန်။
ရေများအပြင်, ငါတို့သည်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်တာဟာယူနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းအိမ်လုပ်ဟင်းချိုနှင့်သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
4 ။ စိုစွတ်သောအဲယားဝေးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
အိမ်မှာအအေးမိရိုက်နှက်ရန်နောက်ထပ်အစွန်အဖျားစိုစွတ်သည့်အဲယားဝေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့ခြောက်သွေ့တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာ, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အတားဆီး.
ဒီလိုလုပ်ဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည် Humidifier ပတ်ဝန်းကျင်လေထု။ တချို့ကတောင်မှကျွန်တော်တို့ယူကလစ်, သံပုရာ, ထင်းရှူးသို့မဟုတ် oregano ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသောအမှု၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ, ဖြည့်စွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးပါ။
နောက်ထပ် option ကိုဖွင့်လှစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိုက်ရိုက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းငယ်မှအငွေ့ရှူရှိုက်မိပါလိမ့်မည်။ ယူကလစ်အငွေ့နှင့်အတူ, ဥပမာ, ငါတို့ချက်ချင်းကယ်ဆယ်ရေးရနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ရနံ့ကုထုံ, ကဘာလဲ?
5 ။ အိမ်မှာအအေးကျော်လွှားဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေ
hay လည်းဖြစ်ပါတယ် သူကကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေတောင်းထားတဲ့မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏နိမိတ်လက္ခဏာကို။ တစ်ဦးကအအေးသင်သည်ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပေး, ခန္ဓာကိုယ်တစ်စင်ကြယ်စေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်ဆွဲငင်အားခြင်းမရှိဘဲလွန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်ကိုယျ့ကိုယျကိုအတင်းလျှင်, ငါတို့သည် get တစ်ခုတည်းသောအရာလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားနှင့်အအေးရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ပြဿနာများများ၏အန္တရာယ်ကို run ။
သင်တို့အဘို့အရက်အနည်းငယ်ကိုယူပါ။ ဆေးဖက်ဝင်လက်ဖက်ရည်ကိုပြင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအားရှောင်ရှားနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှသငျသညျကိုပြောပြသလောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေမှနွေးထခြုံ။ အိမ်သို့မဟုတ်အဆိပ်အလေ့အထထွက်ခွာရှောင်ကြဉ်ပါ.
6 ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သလော
အအေးခံစားနေရပြီးအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်လူနာတစ်ဦးအလားအလာအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည် ကလေးများ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, သက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ်မည်သည့်ရောဂါနှင့်အတူလူ
အဆိုပါအဖျား 39 °ကျော်က4ရက်ပေါင်းထက်ပိုသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်ပြီးနောက် reappeared ကြာရှည်ခံသည်။
ဆောင်းရာသီတွင်အအေးမိကာကွယ်တားဆီးဖို့5အကြံပေးချက်များ
သူတို့က "ကုသခြင်းထက်တားဆီး" ကို သာ. ကောင်း၏ဟုဆိုသည်။ ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, အအေးမိအလွန်ဘုံရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားရပေမည်။ Read more »
အဆိုပါနာကျင်ဆီးအိမ်ရောဂါသက်သာရာရစေဖို့သဘာဝကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ